दिपक मनाङ्गेको चलचित्रमा पूजा–आकाशलाई महंगो पारिश्रमिक, कसले कति लिए ? | Makalukhabar.com
दिपक मनाङ्गेको चलचित्रमा पूजा–आकाशलाई महंगो पारिश्रमिक, कसले कति लिए ?
बैशाख २, काठमाडौं । पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठका फ्यानका लागि खुशीको खबर आएको छ । पूजा–आकाशलाई जोडीको रुपमा एउटै चलचित्रमा देख्न चाहने दर्शक, शुभचिन्तक तथा फ्यानको इच्छा पुरा हुने भएको छ ।
दर्शकको नजरमा कैद भइसकेका जोडी पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठ पुनः एकसाथ एउटै पर्दामा देखिने भएका छन् । दुई चलचित्रमा जोडी जमाइसकेका नायक श्रेष्ठ र नायिका पूजा नयाँ चलचित्र ‘पोई पर्यो काले’ मा फेरि एकसाथ काम गर्ने भएका हुन् ।
शिशिर राणाको लेखन–निर्देशनमा बन्न लागेको उक्त चलचित्रमा पूजाले २० लाख र आकाशले १८ लाख पारिश्रमिक लिएको बताइएको छ ।
‘सम्हालिन्छ कहिले मन’ का लागि १५ लाख पारिश्रमिक लिएकी पूजाले २० लाख पारिश्रमिक लिएसँगै नेपालकी महङ्गी नायिकाको लिस्टमा परेकी छिन् ।
कात्तिक ८ गते लक्ष्मीपूजाको अवसर पारेर रिलिज गरिने चलचित्रको छायांकन जेठबाट सुरु गरिने निर्माण टिमले जानकारी दिएको छ । चलचित्रका निर्माता दिपक मनाङ्गे हुन् ।
तपाईको महिनावारी समयमा हुँदैन ? त्यसो भए यसो गर्नुहोस्
‘गुलाबो सिताबो’ मा अमिताभ बच्चनकाे यस्तो रूप
असार १०, भारत । बलिउड अभिनेता अभिताभ बच्चन अहिले ब्याक टु ब्याक फिल्मको सुटिङमा व्यस्त छन् । उनले ‘ब्रह्मास्त्र’को छायांकन सकिए लगत्तै आगामी फिल्म ‘गुलाबो सिताबो’को छायांकनमा सुरु गरेका छन् । यो फिल्मको सेटबाट बच्चनको नयाँ लुक्स सार्वजनिक गरिएको छ । फिल्मको पहिलो लुक्समा बच्... जारी राख्नुहोस...
विप्लव समूहका नेता पक्राउ परेपछि रेखा थापाको यस्तो आक्रोश
असार १०, काठमाडौं । नायिका रेखा थापा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका सदस्य तथा चलचित्र ‘मालिका’ का निर्माता नरबहादुर कार्की पक्राउ परेपछि आक्रोशित भएकी छिन् । नायिका थापाले सामाजिक अभियान्ता एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मोटिभेटर... जारी राख्नुहोस...
‘गलबन्दी’ विवादः प्रकाश सपूतको समर्थनमा उभिए कांग्रेस सांसद
असार ९, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गायक प्रकाश सपूतको लोकगीत ‘गलबन्दी’ को विवादको विषय उठाएको छ । कांग्रेस नेता एवम् सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले गलबन्दी गीतको विवादका विषयमा कुरा उठाएका हुन् । लोकलय पुर्खाले गाएको गीतलाई पछिल्लो प... जारी राख्नुहोस...
‘चपली हाइट ३’ मा सौगात र श्रृष्टी
असार ८, काठमाडौँ । ‘चपली हाइट २’ पछी ‘चपली हाइट ३’ बन्ने तयारी भईरहेको छ । साउन महिना देखी छायांकन सुरु हुन लागेको चलचित्र ‘चपली हाइट ३’ निर्देशक निकेश खड्काले निर्देशन गर्न लागेको हुन् भने निर्माण अर्जुन कुमारले गर्न लागेका हुन् । नायक सौगात मल्ल र नायिका श्रृष... जारी राख्नुहोस...
‘गलबन्दी’ गीत विवादः प्रतिलिपि रजिष्ट्रारसम्म मुद्दा पुग्ने संकेत, आरोप पुष्टि नभए शम्भू राईलाई मानहानी मुद्धा लाग्ने
असार । पुराना गायक शम्भु राईले अहिलेका जलबल्दा गायक प्रकाश सपुतले ल्याएको ‘गलबन्दी’ गीतको लय आफ्नो श्रृजनासँग मेल खाएको दावी गरेपछि यसबारे चर्चा परिचर्चाले बहस छेडिएको छ । अहिले बजारमा सुपरहिट रहेको ‘गलबन्दी’ गीतको सर्जकमा ‘शम्भु राई’ को नाम लेखेर प्रकाश सपुतलाई... जारी राख्नुहोस...
बिवादै बिवादको बिचमा ‘साङ्लो’को फस्ट लुक्स सार्वजनिक, यस्तो देखिए निकिता र विराज
असार ६, काठमाडौँ । विवादै विवादको बिचमा नायक बिराज भट्टको डेब्यू निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र ‘साङ्लो’को फस्ट लुक सार्वजनिक गरिएको छ । जेठ २७ गते बसेको डोटीको जोरायल गाउँपालिकाको बैठकले विकास बजेटबाट यस चलचित्रलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपछी यस चलचित्र विवादित बन्न पुगेको हो ।... जारी राख्नुहोस...
सलमानले लिए बिग बसकाे एक एपिसोडकाे यती मंहगाे पारिश्रमिक
असार ६, भारत । बलिउड नायक सलान खान फिल्ममा अभिनय, विभिन्न उत्पादनको विज्ञापनका साथै पछिल्लो ९ वर्षदेखि रियालिटी शो बिग बसलाइ पनि होस्ट गरिरहेका छन् । कार्यक्रमको १३ औं सिजनमा पनि उनी देखिनेछन् । खास कुरा के हो भने यसपटक कार्यक्रमबाट उनको कमाईमा करिब सय करोड भारुको वृद्धि भएको छ । २६ एपिसोडका लागि प... जारी राख्नुहोस...
प्रकाशलाई जेल हाल्ने रे !
असार ५, काठमाडौं । पछिल्लो समय दुई चर्चित गायक शम्भु राई र प्रकाश सपूत चर्चामा छन् । पछिल्लो समय दर्शक श्रोताका मन मुटुमा बस्न सफल गायक सपूतलाई आफ्नो नयाँ गीत ‘गलबन्दी’ ले त चर्चामा ल्यायो नै । साथै उनको उक्त गीतमा ‘चोरी’ को पनि ट्याग लगाइयो । शम्भु राईको धेरै पुरानो देउसी... जारी राख्नुहोस...
ड्रेसका कारण ट्राेल बनेकी वर्षा यसो भन्छिन्
असार ४, काठमाडौँ । केही हप्ता अगाडी चलचित्र ‘जत्रै जात्रा’ लिएर अष्ट्रेलिया पुगेकी नायिका वर्षा राउत निकै विवादित र ट्रोलको शिकार भएकी थिईन् । अष्ट्रेलियमा चलचित्रको विशेष शोमा उनले लगाएकी सेतो गाउनमा कालो थोप्ला भएको अर्धबक्षस्थल समेत देखिने ड्रेस लगाएपछी उनी निकै विवादित र ट्रोल शिकार... जारी राख्नुहोस...
६ महिना अघि मात्रै गरेका विवाह गरेका निर्माता सोहन मृत भेटिए
असार ४,भारत । इन्डियाज गट ट्यालेन्ट सेभेन र मास्टरशेफ इन्डियाजस्ता कार्यक्रममा काम गरिसकेका सिनियर पोष्ट प्रोड्युसर सोहन चौहानलाई मृत पाइएको छ । उनको शव मुम्बईको आरे कोलोनीमा रोयल पाम्स सोसाइटीको एक पोखरीमा भेटिएको हो । स्पटबोयका अनुसार उनको शव आइतबार राती भेटिएको हो जसलाई पोस्टमार्टमका लागि सिद्धा... जारी राख्नुहोस...